Yechokwadi Bhodhi Game Geeks Ari Kutogadzira Mitambo paVo Chaivo Mari
Ngatidzokerei kuna Kubvumbi 2020. Panguva iyoyo, denda rakanga richangotanga kunze kwenyika, uye vanhu vakavharirwa pamba vasina chekuita. Uye vatambi vematafura havana zororo. Sezvo isu tese tichiziva, tafura vatambi mapfuti mahombe anozvigadzira yavo mepu mepu, mabhokisi ekuchengetera uye kunyangwe vakazvitsaurira matafura emitambo. Uye ...
Baba vane mwana vanogona kuburitsa "bhodhi mutambo wepasirese"
Wakamboona baba vachichengeta mwana here? Mupfungwa dzevanhu vazhinji, vanababa vanochengeta vana vavo = "vasina basa". Asi muHuddersfield, UK, kune baba vakadaro, mukuita kwekutarisira vana vavo kwete chete vakanaka, uye nenzira, vakagadzirawo bhodhi g ...
Zvakareruka Zvakataurwa Pane Kuitwa! Maitiro Ekudzivirira "Dhizaini Dhizaini" YeMitambo Covers
Tichitarisa pamitsara yemitambo yebhodhi padhodhi yemutambo, unogona here kurangarira mutambo une kavha inofarirwa pakutanga pakuona? Kana mutambo une mashandiro ayo unonakidza, asi unoratidzika kunge unotyisa. Kune imwe nhanho, chifukidziro chemutambo chinotarisa kuti mutambo wakanaka here kana kuti kwete. Nekuvandudza kwevanhu '...
Kukura Maitiro eVasikana Boka reKorea Bhodhi Game Dhizaini
Iyo indasitiri yezvidhori yakave yakakwana zvakakwana muSouth Korea. Sezvo chirevo chichienda, Korea ine hupfumi hutatu: chidhori, kutenga, chikafu. Zvidhori zvinotaridzika zvakafanana, asi pane zvidhori zvishoma zvinonakidza. Munguva pfupi yapfuura, Mune graphic dhizaini indasitiri yevechidiki chizvarwa muSouth Korea, ipapo ini ...
Maonero emakambani emugadziri wemutambo webhodhi
Kylin manufactory inyanzvi yekugadzira uye kuburitsa kunze kwemutambo webhodhi. Chiono chedu ndechekuti: 1. Kubatira pamwe nevatengi vepasirese uye nekupa kuvimba, kuvimbika masevhisi kwavari, iri kambani yakatanhamara mumunda wezvigadzirwa zvemitambo. 2. Kuzvipira pachedu mukuvandudza dhizaini yekugadzira ...
Tsika Yakadhindwa Playmat, Tsika Dhaisi, Mucheka Mats Bhodhi Mutambo, Kusimbiswa Makadhi MuMapuranga Anobata, Tsika dzekutamba Makadhi, Kadhi Sleeve,